कार्तिक १, २०७५ | संस्मरण
मद–मांसमा उहिलेदेखि नै कहलिएको जाति हो, लिम्बू । यो परम्पराले लिम्बू समाजलाई झनझन् गरिबीतिर धकेल्यो । समाजमा चेतना पटक्कै थिएन । शिक्षा भए पो चेतना हुन्छ ।
विसं १९९५ तिर पहिलो विश्वयुद्धमा हवल्दारसम्म पुगेर सेवा निवृत्त भएका त्यतिबेलाको इलाम चुक्चीनुम्बा (हाल माङसेबुङ)का फलामसिंह लिङदेन हाम्रो गाउँ पाँचथरको पौवाभन्ज्याङमा आए । वरिपरिका गाउँले बटुलेर हाम्रै घरमाथिको डिलमा भित्ता बाँसको चित्राले बेरेको– गुन्द्री, सेउलाले छापेको छाना भएको एउटा स–सानो कटेरो बनाइदिए । भुइँमा राडीपाखी ओछ्याइयो । हाम्रा बाबु–ठूलोबाबुले पनि यसमा ठूलो सघाए । उनको कटी तयार भयो ।
त्यहाँ कुटी गाडेर बसेपछि सबैले छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा पढाउनुपर्ने नियम बसाले उनले । उनले भने, ‘अशिक्षा र कुसंस्कारले नै समाजलाई अधोगतिन्मुख गराउने र गरिबी बढाउने हो, यसलाई तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ ।’ उनले काटमार गर्नु हुँदैन बरु मासु–रक्सी खानै बन्द गर्नुपर्छ, सोधृत (लिम्बू संस्कारमा एक किसिमको दाइजोजस्तै) दिनु हुँदैन, बिहे–बटुलोमा ऋण काढेर फजुल खर्च गर्नु हुँदैन भनेर त्यसबेलाको समाजलाई एउटा नयाँ सन्देश दिए । उनले अर्ती दिए– यसले ऋणमाथि ऋण थपिँदै जाँदा एक दिन सारा जग्गाजमिन साहूको हुन्छ । तिमी घरबारविहीन कंगाल हुनेछौ ।
युरोपमा युद्ध गर्दाका प्रसंगमा होस् या बर्माबाट विभिन्न भूगोल र बस्ती छिचोल्दै आउँदाको सन्दर्भमा होस्– धेरै अनुभव र अनुभूति बटुल्दै आए । उनले युद्धको भयानक विभीषिका प्रत्येक्ष देखेका थिए । युद्धको दुष्परिणामले समाजमा ल्याउने दुस्ख र सन्त्रासलाई पनि उनले नजिकबाट अनुभव गरेका थिए । युद्ध सकिएपछि उनी स्वयं मानसिक रूपमा विचलितजस्ता भएका थिए । अनि, ती गुरुलाई भेटेपछि उनको आस्था अध्यात्मप्रति रुपान्तरित भयो । उनलाई हत्या–हिंसाविरुद्ध केही गर्ने कुरा फुर्योत होला ।
कसैकसैले उनलाई आर्य सम्प्रदायको शिक्षाबाट पनि प्रभावित थिए भनेका छन् । यसको स्रोत मलाई थाहा छैन । जोसमनी धर्म–सम्प्रदायबाट दीक्षित थिए भन्नेसम्म मात्र थाहा छ । जेहोस्, हाम्रो समाजमा युगौँयुगदेखि जरा गाढेर बसेको कुरीति, कुसंस्कार र अन्धविश्वासलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्नुपर्छ भन्नेमा उनले मानिसलाई सम्झाए । ‘फेदङ्मा’ भन्ने हाम्रो धर्मपद्धति अनुसार देउतैपिच्छे सुँगुर, कुखुरा, अन्डा–आदि पशुबलि दिएर पूजा गर्ने परम्परालाई परित्याग गर्न लगाई आर्यपद्धति अनुरूपको होम–यज्ञादि गर्ने आफ्नो अनुष्ठानभित्र समावेश गरे । फेदङ्मालाई पूरै हटाए । उनले हिन्दू धर्म अन्तर्गतको जातजाति विभेदविरुद्ध पनि अभियान चलाए ।
यसरी उनले समाजमा एउटा ठूलो सांस्कृतिक–शैक्षिक क्रान्ति नै ल्याए । यसले आफ्नो लिपि र भाषाप्रति मोह जगायो । भक्ति जगायो । यिनले लिम्बूको जमिराखेको संस्कारविरुद्ध आन्दोलन छेडे । फलामसिंहले विसं १९७७–७८तिर सुरु गरेको यो अभियानले १० वर्षमै समाजमा ठूलो प्रभाव छाडिसकेको थियो । हजारौँ लिम्बूहरू मद–मांस छाडेर यिनका पछि लागे । केही समयमै यिनी महागुरु फाल्गुनन्दका नामले त्यस भेगमा मात्र होइन, नेपालभरि नै प्रसिद्ध हुन पुगे । महागुरु फाल्गुनन्द भइसकेपछि मैले उनका हातबाट कुराउनी खाने अवसर पाएको छु । उनले प्रसाद भनेर हातमा राखिदिएका थिए ।
(साभार : मजेरी डट कमबाटा)
हिजो क्रान्तिमा लेखिएका नाराहरू जिउँदै छन् ! काठमाडौंको एउटा अनुहारलाई मैले सोधें सत्ताको टाङमुनि ...
शब्द रहरमा पोखिए जसराज किराँती
बडो रोचक ढङ्गले पोखिँदै थिए जसराज किराँती, काठमाडौंको दीपज्योति हाईस्कुलमा शब्द रहर ...
एउटा पागल युवा छ तिमीलाई धेरै मन पराउँछ तिमीलाई धेरै प्रेम गर्छ र हरक्षण खेलिरहन्छ तिम्रा भावनासित तिम्रा सम्वेदनासित जो नजिक छ आस्थासित जो उभिन्छ मायासित, भावनासित ऊ दौडन्छ कल्पनासित ऊ सुत्छ हरेक रात नयाँ(नयाँ सपनासित ऊ खेल्छ अश्मितासित ओ ! ...